ရခိုင့်အတွေးအခေါ်: ဆရာ ဒကာ ဂျီတော့ ချက်တိန် စာပီ စကားဝိုင်း
ဆရာ ဒကာ ဂျီတော့ ချက်တိန် စာပီ စကားဝိုင်း
ကိုယ်တော် … တကာတော် နီကောင်းလားဂု
ဆရာတော် အဂု ချင်းမိုင်ကို ကြွရောက် သာသနာပြုနီရေဂါး
ဒကာ … နီကောင်းပါယင့် ဆရာတော်။ တပည့်တော်လေး သာဓုခေါ်ပါ ယင့်
ဪ ဟုတ်ပါlလား။ ဆရာတော် ဇာခါပြန်ပါဖို့ လေး
ကိုယ်တော် … ထိုင်းမချေတိ လှလို့ ထိုင်းက ပြန်ရဖို့စွာ တစ်စိချေ စိုးရိမ်နီရေ
ကိုယ်တော် … 24 တနားချေက လေယဉ်လက်မှတ် ဘိုကင်လုပ်လိုက်တေကား
1:35 AM ဒကာ : ဆရာတော် တောင်ကား ဈာန်လျှော လားနိုင်ပါရေ.
ကိုယ်တော် … ဟုတ်တေ ဟုတ်တေ
1:36 AM ဒကာ … ဆရာတော် ကျန်းခန်. သာလို့မာပါရေမလား
1:37 AM ကိုယ်တော် : မာရေ တကာ
1:39 AM ဒကာ : တပည့်တော်လေ့ ယင်းပိုင် ကြားရစော် ကိုယ်စိတ်နှလုံး ဖရန ပီတိ ဂွမ်းဆီထိရေ ပိုင် ခံစားရပါရေ
ကိုယ်တော် : ကျန်းခန်းသာလို့မာရေပိုင် မျက်စိလည်းကောင်းရေအတွက် ထိုင်းက တကာမချေရို့ အလားကားဖော်ပြပီးထားရေ အလှတိကိုလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခံစားနိုင်ရေ
1:43 AM ဒကာ : ကိုယ်တော် မြသလွန်စောင်တန်း တရား မှန်းပနာ ဇာခါမှေ: စက် အ နားယူတော် မူပါဖို့လေး
1:44 AM ကိုယ်တော် : ဆွမ်းနန့် ရောစားလို့ မရရေ တကာမချေတစ်ယောက်နန့် စကားပြောနီလို့ ကျိန်းစက်ချိန်နည်း နည်းနည်းပါးပါး နောက်ကျစရာ အကြောင်းရှိရေ တကာတော်
1:46 AM ဒကာ : တပည့်တော်လေး လက်စုံ ဆယ်ဖြာ ထိပ်မှာ တင်လို့ ကိုယ်တော်ကို ရည်မှန်း ကန်တော့ပန်း ဆင်ပါယင့်
1:47 AM တပည့်တော်လေး လက်စုံ ဆယ်ဖြာ ထိပ်မှာ တင်လို့ ကိုယ်တော်ကို ရည်မှန်း ကန်တော့ပန်း ဆင်ပါယင့်
1:49 AM ကိုယ်တော် ရွှင်လန်းကြည်သာ အွန်လိုင်းမှာ ရှိပါသီးလာ:
ကိုယ်တော် : ဟိသိရေ
1:52 AM ဒကာ : တခါတရီ အွန်လိုင်: အစုတ် ဝင်ပနာရှုပ်ကေ ဘုန်းကြီးရဟန်း လည်း လက်ပန်းတကျ ဖြစ်ကတ်ရရေ ကား
________________________________________ 11 minutes
2:04 AM ကိုယ်တော် : ဖြစ်လည်း ဖြစ်ဖူးဗျယ်
2:05 AM လက်ပန်းကျ လှုိင်းတိလီတိကြးမာ အစုန်အဆန်ကူးခတ်ယင်း
________________________________________ 53 minutes
2:58 AM ဒကာ : တောက်ပ မျက်လုံး အပြုံးမျက်နှာ ဂျီတော့မှာ အသူ့ပုံပါလေ့ ဆရာတော်
ကိုယ်တော် : တကာမချေ
2:59 AM ဒကာ : မြင်သူရူမ၀ ကောင်းလှပါထော ၊ တပည့်တော်ကိုပီးပါပလင်
3:01 AM ကိုယ်တော် : ဖြစ်ဖို့လားဂု ဘုန်းကြီးလက်ထွက်ဆိုကေ တစ်ခုလည်း မကျန်ဗျယ် ဘုန်းကြီးတိသုံးရေ ရေဒီယိုကိုကြည့်ဖိ
3:04 AM ဒကာ : တပည့်တော်တယောက်၊ စိတ်တိဖောက်ဗျယ် ရည်းဇားတိရာ လိုချင်နီလို့ပါ
ကိုယ်တော် : ဒေဘုန်းကြီးလည်း ယပိုင်ကားဒေ ထိမ်းမနိုင်သိမ်းမရ မယားလိုချင်စိတ်ကို
3:08 AM ဒကာ : ကာမဂုမ်ကို အာရုံတော်မှာ တွယ်မိလိုက်တိုင်း ဈာန်ယိုင်လျှောခ ရေ သာဓက တိလေး မနည်း မနောပါ ကား။ ဘုန်းကြီးကိုစာချသည်ကားမဟုတ်။ သိစော်ကိုမပြောပြကေ သောကရောက် လို့ ပါ အရှင်ဘုရား
3:09 AM ကိုယ်တော် : ဟား ဟား
တကာကြီးလည်း တိုးတက်မှုဟိလို့ ကဗျာနန့် စာနန့် စကားတိ ပြောတက် ဟောတက်လာဗျာယ် တကာတော်
3:14 AM ဒကာ : ဆရာတော်ရို့၏ ပြောပြသင်ပြ မဟိခကေ၊ တောကြိုတောင်ကြား၊ ဇနပုပ်ကြားမှာ၊ ပညာမဟိ၊ သုတနတ်ထိ နဲ ရိုင်းစိုင်း တိရိဆန်၊ ဖြစ်နိန်ပါဖို့ဟန်…
3:18 AM ဆရာတော်ဘုရား၊ အလုပ်များကေ၊ စာပီစကားဝိုင်း၊ ရွှီ:ဆိုင်းထားကတ်ပါမေ
ကိုယ်တော် : ဟား ဟား
အဂုထိုင်းကိုရောက်နီရေ ယေခါ သီရိလင်္ကာက ကုလားမချေကိုလည်းလွမ်းရေ မြန်မာပြည်က တကာမချေကိုလည်း လွမ်းရေ
1:20 PM ဒကာ : သိရိလင်ကာ ကုလားမ၊ မြန်မာပြည်က တကာမ၊အစစရို့လည်း အပုပ်ကောင်ကို ရုပ်ဆောင်ထားရေ ပုထုဇဉ် ဣထိယ ဖြစ်ရသည် သကာလ၊ ခန်ဒါနမ်ရုပ် အကောင်ပုပ်တိ ပါရာ
1:22 PM ကိုယ်တော် : မှန်ပေသည် တကာကြီး သို့ပါသော်လည်း ပုထုဇ္ဇနောဥမ္မတ္တကော ဟူသည့်အတိုင်း ဆရာတော်အစရှိသော် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်း ပုထုဇဉ်မျှသာ ဖြစ်သေးသောကြောင့် တကာမ အလှပချေတိနှင့် ကင်း၍မရနိုင်သေးကြောင်းပါ တကာကြီး
1:27 PM ဒကာ : ဂနာမြိုင်ထဲ ဒကာမတိကို ဝေးပနာ တောရပ်ဆောက်ခိုဖို့ မတိုက်တွန်: လိုသော်လည်း၊ မတ်တံဇာနိယ ပဏ်တိတော အဆိုဟိရေပိုင်၊ ပညာဟိရို့သည် အတိုင်းအဆကို သိဟိကတ်ပေရေ မဟုတ်ပါလား အရှင်
1:30 PM ကိုယ်တော် : ဘုန်းတော်ကြီးများကို တောရိပ်တောင်ရိပ်၌ သီတင်းသုံး၍သာ တရားကျင့်ကြံအားထုပ်သင့်သည် မြို့တွင်းရွာတွင်း၌ တကာမအစရှိသော မာတုဂါများနှင့် ဆက်ဆံ၍ နီထိုင်ခြင်းငှာ မသင့်ဟူသော်အမြင်သည် လုံးဝမှားပါသည် တကာကြီး။ ဘုရားသျှင်သည်ပင် လေးဆယ်ငါးဝါကာလပတ်လုံး ၀ါလေးဆယ်ခန့်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုက်တက်သော မြို့ကြီး ရွာကြီးများ၌သာ အချိန်ကုန်ခဲ့ပါ၏ တကာကြီး
1:38 PM : ဒကာ ... ဘုရားရှင်သည်ကား သဗညုတ ညာဉ်တော်ကိုရရှိခ သည်နှင့်အညီ၊ သုံးလူနတ်သားအကျိုးများစီဖို့ တရားဓမ ဆိုဆုံးမလို့၊ မြို့ရပ်မြို့ရွာ၊ လှည့်လည်တရား ဟောကြားခစော်ပါ။ ဣထိယရို့နှင့် ကိလေသာ ကာမဂုံ ကိုကား ဝီးစွာရှောင်ကွင်း နိဗန်ရောက်ကြောင်းတရားတိကိုရာ ဟောကြားမိမှာ ဆုံးမတော်မူခ စော်မဟုတ်ပါlလား?
ကိုယ်တော် : အိမ်း… အိမ်း… အိမ်း… ဟုတ်ဗျာယ် ဒကာ။ အချိန်လေး လင့်ဗျာလ်။ ဝတ်တက်ဖို့ အချိန်ကျ ခွဲကတ်မေ ဖိ။
ဒကာ : တင်ပါ ဘုရား။
ယော မိုက်ပါရေထော။ ဒေချင့် အကောင်း ပြောကတ်တေ ချက်တိန်ပါလား
Anonymous April 13, 2009 at 2:23 PM